Akwụkwọ Andrew Davis na Martech Zone |
Edemede site na Andrew Davis
Ha na-ekwu "tinye ego gị ebe ọnụ gị dị." Okwu, n'okporo ámá, na ikekwe n'okporo ámá ọ bụla n'ụwa, bụ na Google na Amazon bụ ndị na-emepụta ego gị mgbe a bịara n'ịzụ ahịa n'ịntanetị. Shozụ ahịa Google na Mgbasa ozi Ngwaahịa Amazon bụ ihe abụọ doro anya na abụọ dị ike, na-akwụ ụgwọ ma na-akwụ ụgwọ ịzụ ahịa ịzụ ahịa (CSEs) dị adị. Ma onye ọ bụla maara nke ahụ. Ihe kachasị dị ka amaghị bụ ọkwa mmiri nke CSE Refeyim: The
Mọnde, Jenụwarị 14, 2013 Thursday, June 18, 2015 Andrew Davis
Họrọ ebe ị ga-ere ihe gị n'ịntanetị nwere ike ịdị ka ịzụ ụgbọ ala mbụ gị. Ihe ị họọrọ dabere na ihe ị na-achọ, na ndepụta nhọrọ nwere ike ịba ụba. Ebe nrụọrụ ecommerce nke obodo na-enye ohere ịbanye na netwọkụ nke ndị ahịa ma ha na-ewepụkarị uru. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ire ngwa ngwa ma ghara ichegbu onwe gị maka oke, ha nwere ike ịbụ ụzọ kacha mma.
Usoro CPC chịkọtara data sitere na ndị na-ere ahịa 100 dị n'ịntanetị nke nha dịgasị iche iche, ihe dịka nde 4.2 clicks na 8 nde ego ha nwetara iji chọpụta njirimara ahịa kachasị mma n'ịntanetị. Ngwakọta ahịa ịzụ ahịa gụnyere weebụsaịtị dịka Pricegrabber, Nextag, Mgbasa ozi Ngwaahịa Amazon, Shopping.com, Shopzilla na Shozụ ahịa Google. N'ime ihe ọmụmụ a, anyị na-enyocha saịtị ịzụ ahịa kachasị mma maka azụmaahịa azụmaahịa ecommerce, ntinye ego, ọnụego mgbanwe, ọnụahịa nke ọrịre, na ọnụego kwa ọnụego, wee gbakọta ha niile
Amazon ugbu a guzo dịka otu n'ime isi mmalite ahịa kachasị ike n'ụwa. Site na ọtụtụ nde ndị ahịa na-agba ịnwụ anwụ na ndị na-akwado ya, ọ bụghị naanị ndị ọzọ na-ere ahịa aka na na offline, mana ọwa ahịa ahịa n'ịntanetị niile. Ngwaahịa kachasị ọhụrụ nke Amazon, nke Kindle Fire, were ụfọdụ nkatọ mara mma n'izu gara aga. Ka o sina dị, ahịa ka dị egwu, a na-ere ihe karịrị 1 nde Kindle (gụnyere Fire Kindle) kwa izu maka izu nke atọ